Waxaan horeyba u ognahay taariikhda bilowga xilli-ciyaareedka labaad ee Hoyga Kahor Madoobaadka | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan horey u ognahay taariikhda bilowga xilli-ciyaareedka labaad ee Hoyga Kahor Madoobaadka
Mid ka mid ah taxanaha qoyska oo dhan oo aan ka heli karno Apple TV + waa Hoyga Kahor Madowga, taxane ah kaas soo maray xanuun iyo sharaf la’aan by adeegga fiidiyowga ee qulqulaya Apple inkasta oo aad u xiiso badan tahay (haddii aadan weli fursad siin, waad qaadanaysaa).
Guriga Kahor Madoobaa waa riwaayad qoys oo qarsoodi ah, oo xilli ciyaareedkeedii labaad, sida ku cad Deadline, uu soo bandhigi doono wax yar ka hor xagaaga, gaar ahaan 11-ka Juun. Maalintaas, Apple ayaa sudhan qaybtii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkii labaad oo Jimce walba wuxuu ku dari doonaa mid cusub.
Xilligan majiro trailer rasmi ah ee xilli ciyaareedkaan labaad, oo aan wali sugeyno dhowr toddobaad, laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aan uga helo Mac waxaan ka heli doonnaa adiga.
Xilli ciyaareedkaan labaad wuxuu raaci doonaa wariye Hilde Lasso (waxaa ciyaaray Brooklyn Price) sida baarayaa qarax weyn oo ka dhacay beer maxalli ah. Inta lagu guda jiro baaritaanka, Lasso wuxuu wajihi doonaa shirkad awood leh. Tani waxay u haysaa khatar labadiisa qoys iyo magaalada yar ee uu ku nool yahay, Erie Harbor.
Qeybtii ugu horreysay ee taxanahan, oo ay isla jilayso isla atariishada, waxay ina tusaysaa sida qoyska oo dhami ugu guurayo magaalada aabbaha qoyska halkaas oo weriyaha da'da yar uu ku tago baaro kiis dil hore in dadka oo dhami doonayaan inay aasaan oo ay ilaawaan weligood.
Si ka duwan xilli ciyaareedkii koowaad, taas oo waxaa si buuxda loo bilaabay Abriil 2020 (cudurkan faafa awgood), xilli ciyaareedkaan labaad Apple waxay qaadan doontaa bandhig toddobaadle ah
Jim Sturgess (Guud ahaan Caalamka) wuxuu ku soo laabtay aabbe Lasso. Xilli ciyaareedka labaad waxaa sidoo kale kasoo muuqan doona Kylie Rogers (Yellowstone), Joelle Carter (Justified), Aziza Scott (The Fosters) iyo Abby Miller (The Sinner), iyo kuwo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Waxaan horey u ognahay taariikhda bilowga xilli-ciyaareedka labaad ee Hoyga Kahor Madoobaadka
La daabacay daraasad cusub oo ku saabsan cudurada wadnaha oo lagu sameeyay bukaanka qaba Apple Watch